Qalinka qaata,Qoriga tuura,Dagaal dambe diida,Nabada doona Waa Hees Wadani ah oo ku baxeeysa Luuqada Afka Jarmalka & Soomaliga - iftineducation.com
aadan21 / May 5, 2012
iftineducation.com – Fanaaniinta Soomaaliyeed aad ayeey ugu kala duwan yihiin dhanka Wadaniyada maxaa yeelay qaar ka mid ah Fanaaniintaan Heesahooda lagama waayo Sanad kasta Heeso Wadani iyo Guubaabo ah oo loo soo jeedinayo Shacabka Soomaaliyeed oo dagaal iyo qalalaase quus ka taagan .
Fanaaniinta qaar waxeey ku mashquulaan heesaha Jaceeylka ah iyo arimaha kale ee iyaga u qaaska ah sida Xayeeysiinta iyo ka heesida Aroosyada. Heestaan cusub oo Wadani ah waxeey ku socotaa Dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda Dilka & Dhaca faanka u maleeya waxaana loogu baaqay inay dhibkaas joojiyaan una soo jeestaan dhisida dalkooda Hooyo oo Colaad iyo dagaalo is daba joog ah ku bur buray.
Sidoo kale Miraha Heestaan waxaa ka muuqdo ama lagu daray erayo Afka Jarmalka ah (Deutsch) oo iyagana ka hadlaya dhibaatada ay leedahay Colaada iyo Dagaalka oo ah mid wax qarbuda balse aan wax dhisin.
Guurka Ikraan Caraale oo beri ka dhici doona Magaalada Hargaysa